Jona 13, 2018 Admin
Binance mikasa ny hanorina birao ao amin'ny Channel Nosy
Taorian'ny fanorenana birao vao haingana tao Malta, fifanakalozan lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny varotra boky, Binance, dia nanapa-kevitra ny hanokatra ny birao iray hafa, tamin'ity indray mitoraka ity tao amin'ny Channel Nosy (nosy Jersey, eo amin'ny UK sy Frantsa), manome azy mihoatra manovaova ny miasa ao anatin'ny UK sy ny tsena Eoropeana
"Global fanitarana tetikady… ihany koa ny mamorona miasa mafy fototra ny fanitarana ho ao an-sisa Eoropa "Binance Filoha Tale Jeneralin'ny hoy Changpeng Zhao.
Ny firenena manana ny fiainana manokana sy ny hetra tsara ny fepetra ho an'ny orinasa izay te-hanorina ny kaonty ara-bola tao. Binance dia tsy maintsy mandoa ny 10% hetra eo amin'ny vola miditra.
Coinbase nandefa crypto fanondroana tahirim-bola
Crypto goavam-be Coinbase nanambara fa ny cryptocurrency fanondroana tahirim-bola, naseho voalohany tamin'ny Martsa, ankehitriny misokatra ho an'ny mpampiasa vola any Etazonia.
Amin'ny vahoaka nanao tao amin'ny lahatsoratra bilaogy fa nahita "be" avy amin'ny mpampiasa vola liana, ary ankehitriny mba manolo-tanana ho an'ireo izay te hampiasa vola eo $250,000 ary $20 tapitrisa. Amin'izao fotoana izao, amin'ny vahoaka nanao, fandraisana anjara dia voafetra amin'ny U.S. ary ireo izay mpampiasa vola ofisialy.
Coinbase Index Fund manome mpampiasa vola hatsiaka rehetra fananana voasoratra ao amin'ny fifanakalozana, mavesatra ny tsena capitalization.
Coinbase no milaza fa dia miasa mba hanomboka vola hafa izay "azon'ny rehetra manarona ny mpampiasa vola ary malalaka kokoa ny fananan'ny nomerika isan-karazany ny" mba, raha toa ianao tsy ofisialy U.S. mpampiasa vola, dia mety ho fahafahana ho anao avy arakaraka izay manaraka.
Zug mizaha toetra Blockchain hanapa-kevitra ny afomanga sy ny dizitaly ID
Ny tanànan'i Zug, an-trano ny Soisa Cryptotal, Manasa ny mponina ho amin'ny fanandramana blockchain fifidianana. Izy ireo mba hifanakalo hevitra andrasana amin'ny olana isan-karazany ny zava-dehibe eo an-toerana, anisan'izany ny afomanga fanao isan-taona nandritra ny Festival farihy sy ny fampiasana ny nomerika hadilanana mba mindrana boky sy toeram mandoa saran'ny.
$197M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao